Somalia: Sudan & Soomaaliya oo ka wada hadlay arimo dhowr ah [Sawirro]
Home Somali News South and Central Somalia: Sudan & Soomaaliya oo ka wada hadlay arimo dhowr ah
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo booqasho rasmi ah ku jooga dalka Sudan ayaa xalay kulan la qaatay Madaxweynaha dalkaas Mudane Cumar Xasan Al-Bashiir.
Madaxweynaha Soomaaliya iyo dhiggiisa Suudaan ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka soo-jireenka ah ee ka dhaxeeya labada dal iyo sidii kor loogu qaadi lahaa, Sidoo kale, xubnaha Golaha Wasiirrada ee la socda wafdiga Madaxweynaha ayaa iyagana gaar gaar ula kulmay dhiggooda.
Labada Madaxweyne ayaa ayaa isla gartay qorshe lagu sameynayo dallad dhaqaale oo ay ku midaysanyihiin dalalka Geeska Afrika oo uu soo jeediyay Madaxweyne Al Bashiir,
Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in Dowladda Soomaaliya ay ku bixinayso dadaal dheeri ah sidii looga miro dhalin lahaa qorshayaasha ku aaddan xoojinta iskaashiga dhaqaale ee wadamada Geeska Afrika.
“Dallad dhaqaale oo wadamada Geeska Afrika ay yeeshaan waxa ay kor u qaadaysa heerka uu joogo dhaqaalaheenno, waxa ay meesha ka saaraysaa xasilooni darrada haraysay qaybo badan oo ka mid ah gobolka.” Ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.
Safarkan waxaa Madaxweynaha ku wehliya Marwada Koowaad ee dalka, Marwo Zaynab Cabdi Macalin, Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga Ah Mudane Yuusuf-Garaad Cumar, Wasiirka Waxbarashada iyo Tacliinta Sare Mudane Cabdiraxmaan Daahir Cismaan, Wasiirka Beeraha Mudane Siciid Xuseen Ciid, Wasiirka Xannaanada Xoolaha Mudane Sheekh Nuur Maxamed Xasna, Wasiirka Dhallinyarada iyo Isboortiga Marwo Khadiijo Maxamed Diiriye, Wasiiru Dowlaha Madaxtooyada Mudane Cabdulqaadir Macalin Nuur, Xildhibaanno, Guddoomiyaha Bankiga Dhexe iyo Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed.
Maxay lasoo kulmeen Sanataradii Tagay Magaalada Baydhabo ?
Dhacdo kale oo Xanuun badan oo Muqdisho ka dhacday
DHAGEYSO: Ehelada Marxuumkii la gubay oo markale hadlay
Guryo iyo Beero la iska Gubay & Xiisad taagan -Akhriso
Mohamed - September 22, 2018
Wararka naga soo gaaraya Gobolka Shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in maleeshiyo...
Somalia: PM Kheyre Visited Wounded lawmaker
DHAGEYSO: Farmaajo oo Hargeysa Tagi kara & M.Biixi oo Muqdisho iman...
Sidee u dhacay Qaraxii lagu dhaawacay Xildhibaan Barow ? [Sawiro]
Maxay Somaliland u joojisay Shidaalka kaga imaan jiray Ethiopia ?
Abukar - September 22, 2018
Shan shaydaan oo shar la doonay wada jirka iyo midnimada iyo...